I-China i-100ml iGlasi ejikeleze iglasi yeBhotile yeeGlasi zeBhotile yobisi kunye nomzi mveliso weCork kunye nabaxhasi | IHoyer
I-100ml yeGlasi ejikelezayo yeBhotile yeeGlasi zeBhotile yoMlaza nge-Cork
Isixhobo: Ibhotile yenziwa ngeglasi emhlophe kakhulu yesoda kunye necork yenziwa ngamaplanga okusingqongileyo, akunakuze uphinde ukhathazeke ngomgangatho kunye nokukhuseleka kwabo, yonwabele nje ngombono wakho.
Umthamo: I-100ml / 3.5 oz
Ukuphakama: I-75mm / 2.95 intshi
Ububanzi: I-55mm / 2.16 intshi
Intamo: I-50mm / 1.96 intshi
Ukusetyenziswa okuhlukeneyo: Ingasetyenziselwa njengebhotile yokukhuphela, ibhotile yobisi, isitya seti, ibhotile yekofu, indawo yokuntywila yeentyatyambo, umhombiso womtshato. Ungayidlala ngokokucinga okanye ukukhetha kwakho, njengokujikeleza imijikelezo emininzi ngentambo ngentloko, ukufaka iilebheli encinci, okanye ukubhala imibuliso yakho kwiposikhadi entle okanye iphepha kuwe umhlobo okanye iintsapho. Ngokwenene sisipho esigqibeleleyo, esinentsingiselo kunye nesiyilo somtshato, itheko lomhla wokuzalwa okanye nomthendeleko.
Qaphela: Nceda ugcine abantwana bengaphantsi kweminyaka emi-3 ubudala okanye badlale phantsi kweliso labadala, kungenjalo banokwenzakala ukuba baphoselwe kwabanye.
Ubungakanani Umthamo: 100ml Ukuphakama: 75mmUbubanzi: 55mm Intamo: 50mm Umthamo: 3.3 oz Uight: 2.95 intshiUbubanzi: 2,16 intshi Intsimbi: 1.96 intshi
Edlulileyo: I-7 oz 200ml ejikeleze iGlasi yokutsala iJar yeGlasi yeYogurt Jar ngeLid
Okulandelayo: Ijar yokugcina iglasi yokuGcina, iJarize yokutya Jar nge-bamboo Lid
I-16oz Glass yokusela i-Mason Jar
Iibhotile zamanzi zeglasi ezili-18oz zeZiselo kunye neJuic ...
I-7 oz 200ml ejikeleze iGlasi yokutsala iJar yeGlasi yeYogurt ...